Gbasara anyị - Raymin Display Products Co., Ltd.
♦ Ihe anyị na-eme
Raymin Display bụ ọkachamara na R & D ahaziri ahazi, n'ichepụta na ire nke akwụkwọ ngosi akwụkwọ, igbe onyinye na ihe nkwakọ ngwaahịa ngosi ndị ọzọ. Ruo ugbu a, anyị ejirila ihe karịrị otu puku ndị ahịa ụlọ na ndị si mba ọzọ. Site na nkwakọ ngwaahịa na ngosipụta ngwaahịa, anyị na-ewere mkpa ndị ahịa dị ka ihe na-eduga ma jikọta eziokwu iji dozie mmemme nkwakọ ngwaahịa pụrụ iche. Maka iwu ndị erere na mba ofesi, na-eburu n'uche ọnụ ahịa ọrụ nke mba ndị ahịa, anyị na-enyekwa atụmatụ nkwakọ ngwaahịa dị mma, hazie igbe plọg, nchedo nkuku na bọọdụ kaadị maka iwu ọ bụla, iji hụ na nzukọ nke akụkụ atọ nke ngwaahịa ngosipụta ogbe mgbe mbupu Ọ ka nwere ike iru ahịa zubere ụlọ ahịa emebibeghị. Ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ anyị nyere gụnyere ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa, ihe ngosi, họtel na ebe ndị ọzọ. Ngosipụta Raymin na-ekwusi ike na ndị mmadụ, na-agba ume ọhụrụ, ma na-eme ihe kachasị mma iji nye ndị ahịa ihe nrụnye dị mfe, nkwakọ ngwaahịa bara uru ma rụọ ọrụ nke ọma.
N'ileghachi anya n'ọdịnihu, Ngosipụta Raymin ga-agbaso ihe nchoputa nke ụlọ ọrụ dị ka atụmatụ mmepe na-eduga, na-aga n'ihu na-ewusi teknụzụ nke teknụzụ, njikwa ihe ọhụụ na ịzụ ahịa ahịa dị ka isi nke sistemụ ọhụrụ, ma gbalịsie ike inye ndị ahịa ụwa ihe nkwakọ ngwaahịa kachasị mma yana ngosipụta ihe ngwọta.
Culture Ọdịnala ụlọ ọrụ anyị
Kemgbe nguzobe nke Raymin Display na 2012, mmepụta anyị na ndị R&D toro site na obere otu ndị 300 +. Mpaghara ụlọ ọrụ ahụ agbasawo ruo mita 50.000, ntụgharị ya na 2019 eruola 25.000.000 US dollars na otu ọdịda. Ugbu a, anyị abụrụla ụlọ ọrụ nwere ọkwa ụfọdụ, nke nwere njikọ chiri anya na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ anyị:
1. Usoro echiche
Echiche bụ isi bụ "ndị mmadụ, ndị ahịa bụ ndị mbụ".
Corporatelọ ọrụ ụlọ ọrụ bụ "Mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ na ọrụ zuru oke."
2. Isi atụmatụ
Amaja imepụta ihe ọhụrụ: njirimara bụ isi bụ ịnwa anwa ịnwa anwa, nwaa ịnwa, nwaa ịtụgharị uche ma mee.
Kwadoo iguzosi ike n'ezi ihe: Kwado iguzosi ike n'ezi ihe bụ akụkụ bụ isi nke Ngosipụta Raymin.
Ilekọta ndị ọrụ: tinye ego yuan 10 kwa afọ maka ọzụzụ ndị ọrụ, guzobe ụlọ nri ndị ọrụ, ma nye ndị ọrụ nri ugboro atọ kwa ụbọchị n'efu.
Mee ike anyị niile: Ngosipụta Raymin nwere nnukwu ọhụụ, chọrọ ụkpụrụ ọrụ dị oke elu, ma na-achụ "na-emezi azịza niile n'ime ngwaahịa dị mma.
Usoro Mbido ♦lọ Ọrụ
2012 Tọrọ ntọala.
2013 Companylọ ọrụ ahụ ruru nkwekọrịta na Guangdong Fenggao Printing Technology Co., Ltd. wee bụrụ onye ọchụnta ego ya.
2016 Ndị ọrụ R & D nke ụlọ ọrụ ahụ ewepụtala ngosipụta ngosipụta nke abụọ, nke ndị ahịa hụrụ n'anya ma mata ya.
2018 Companylọ ọrụ ahụ agafeela asambodo BSCI wee nweta akwụkwọ obibi Disney na nkwakọ ngwaahịa ngwaahịa.
2019 Companylọ ọrụ ahụ webatara sistemụ njikwa njikwa GMI iji nye ndị ahịa mbipụta dị elu na ọrụ dakọtara agba iji hụ na agba agba ya dị na steeti kacha mma.
2020 Igwe ihe eji arụ ọrụ 3 nke mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ, igwe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ 3 na-arụ ọrụ, igwe na-arụ ọrụ mpempe akwụkwọ 3, 1 CTP igwe na-ebipụta akwụkwọ, 1 igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ 2 na igwe na-acha 1. A na-agbakwunye igwe obibi akwụkwọ ink na ndabere.
1. Modernized Standard Factory Building: Anyị nwere a ogbako nke ihe karịrị 50,000 square mita, onwem na a zuru set nke mmepụta na n'ichepụta igwe, si na-ebi akwụkwọ na igbe gluing.
2. Ahụmahụ: N'ime afọ 20 nke ịmịpụta ahụmịhe na ngosipụta kaadiboodu na ahụmịhe nkwakọ ngwaahịa mara mma. Anyị dịkwa mma na ikpokọta na nkwakọ ngwaahịa maka ngosi racks, iji nyere ndị ahịa ịzọpụta ọrụ na-eri na ha n'akụkụ.
3. Asambodo Oditi: ISO9001, FSC, BSCI, Disney, Walmart
4. Nkwenye dị mma: Anyị na-eji usoro nlekọta GMI maka agba agba; ma jiri igwe nnwale maka nsogbu ihu na ike nke kaadiboodu.
5. Modern mmepụta yinye: Advanced akpaghị aka mmepụta akụrụngwa ogbako, gụnyere onye-nkwụsị mmepụta akụrụngwa maka ebu Ndinam, na-ebi akwụkwọ, n'elu ọgwụgwọ, arịọnụ, laminating na gluing.